Madaxweyne Farmaajo oo furay kalfadhigii labaad ee Baarlamanka federaalka Somalia * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kalfadhigii labaad ee Baarlamanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana si rasmi ah u furay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Furitaanka kalfadhigan ayaa waxaa sidoo kale qeyb galay madaxda dowlad goboleedyada dalka qaarkood xubno ka tirsan beesha caalamka, maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa iyana khudbado ka jeediyey furitaanka kalfadhigan.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo ka mid ahaa madaxdii khudbadaha ka jeedisay furitaanka kalfadhigan ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamanka in la cadeeyo maqaamka Muqdisho.
Madaxweyne farmaajo oo ugu dambeyn jeediyey khudbad dheer oo arrimo badan taabaneysay ayaa ka waramay waxqabadka dowlada.
Waxaa uu sheegay in dowladu ku guuleysatay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xakameynta hubka sharci darada ah ee shacabka lagu dhibaateyn jiray, joogteynta mushaharka ciidamada, shaqaalaha iyo hey’adaha dowladda, la dagaalanka musuq-maasuqa iyo arrimo kale.
Waxaa uu sheegay iney jiraan caqabado hor taagan balan-qaadyo badan oo aan u qabsoomin, kuwaasoo uu sheegay iney u baahan yihiin dedaal iyo iskaashi ballaaran si looga gun gaaro.
Khudbada Madaxweynaha oo taabaneysay arrimo badan oo khuseeya gudaha dalka iyo xiriirka caalamiga ah ayaa iyadoo faahfaahsan waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena soo socda insha allaah